Kedu ihe ị ga-ekiri Netflix mmiri a nke udu mmiri nke ọnwa Nọvemba | Akụkọ akụrụngwa
Kedu ihe ị ga-elele na Netflix nkera nke abụọ nke ọnwa Nọvemba
Miguel Hernandez | | Ihe nkiri na usoro, General, Noticias
Netflix bụ enyi zuru oke maka ngwụsị izu dị ka nke a, ebe mmiri ozuzo na-anabata ma na-ekele ya, ọ bụkwa na n'ọtụtụ mpaghara nke Iberian Peninsula, ọ kwụsịbeghị mmiri ozuzo kemgbe ụnyaahụ, nke ahụ bụ ngọpụ zuru oke maka ndị na-agụ akwụkwọ anyị nwere mmasị dobe maka ụfọdụ ozi na ntụrụndụ. Anyị na-enye gị ya, Anyị ga-akwado ọdịnaya kacha mma ị nwere ike ịhụ n'oge ọkara nke ọnwa Nọvemba Yabụ ị nwere ike ịtụba blanket kachasị dị n'ụlọ ma were ohere itinye onwe gị jupụtara na nri.
Kedu ihe ị na-achọ?, Horror, emereme ma ọ bụ ihe ọchị? Anyị na-ewetara gị ntakịrị ihe niile na nchịkọta ọdịnaya a maka ụtụtụ Sọnde kachasị afọ a, yabụ egbulala, ị na-efu efu.
1 Anabelle - rorjọ
2 Usoro ihe omuma nke ihe omuma
3 Memoirs of International Assassin - Ihe ọchị
4 Girlsmụ agbọghọ mara mma - Drama
Anabelle - rorjọ
Kedu nwa bebi na-achọ ịmata ihe, na ọtụtụ, ga-eme ka ị maa jijiji site n'aka ED na Lorraine Warren, ọ bụrụ na ha dị ka gị, ọ bụ maka ihe, ha bụ ndị na-akwado akụkọ ahụ dabere na ihe ndị mere eme na anyị nwere ike ịhụ n'ime Warren bara uru. Yabụ ọ bụrụ n'ịchọrọ ịtụ ụjọ, Anabelle ọ bụ ihe nkiri zuru oke
Usoro ihe omuma nke ihe omuma
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere ọkà mmụta mbara igwe Stephen Hawking, nke a maara ọtụtụ afọ dị ka onye nwere ọgụgụ isi kachasị na mbara ala a, echefula Theory nke ihe niileWill ga-amụta otú o si merie ọrịa siri ike ya na otú o si metụta mmekọrịta ya. Onye na-eme ihe nkiri Eddie Redmayne meriri Oscar maka ime ejije.
Memoirs of International Assassin - Ihe ọchị
Laughchị ọchị ya na anụ anụ Kevin James, onye na-egwu akụkọ edemede sayensị na-agwụ na akụkọ na-enweghị isi banyere ogbu mmadụ zuru ụwa ọnụ, n'ihi ibipụta akwụkwọ akụkọ ya dị ka a ga - asị na ọ bụ akụkọ mere eme. Ọ bụ otu n'ime fim nke Netflix mepụtara, bụ nke tinyeworo aka na mmepụta ọdịnaya n'oge na-adịbeghị anya.
Girlsmụ agbọghọ mara mma - Drama
Gaa Uma Thurman, Natalie Portman ma ọ bụ Mira Sorvino na akụkọ a dị egwu banyere otu anyị si malite na nwata ịbụ okenye. Oge eruola ka anyị rube isi n’ọrụ ma nọdụ ala na biya iji chọpụta ma anyị emezuola nrọ anyị.
Na mgbakwunye, ị ga-ahụ Ti mkpu 2 na Jackie Brown na ihe nkiri nke Netflix fim.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Kedu ihe ị ga-elele na Netflix nkera nke abụọ nke ọnwa Nọvemba
Meizu weputara ekwentị Helio ọhụrụ na Nọvemba 30
Ngosipụta vidiyo nke ụdị ọhụrụ nke ịkwọ ụgbọala kwụ ọtọ nke Tesla